samedi, 02 décembre 2017 21:43
Marathon International: Fanamarihina ny fanokafana ofisialy
Nosokafana tamim-pomba ofisialy androany ny Marathon International izay atao isan-taona.
Hotontosaina rahampitso alahady 03 desambra, izay miainga eny amin’ny Parvis Analakely izany manomboka ny maraina, ary anodidina an’Ankorondrano, Mahamasina, Anosy ary manodidina an-Antananarivo.
Misy araka izany moa ny teran-tany vahiny handray anjara amin’izany toy ny Ethiopianina, Kenya, Afrika atsimo, ary isika Malagasy moa dia mazava ho azy fa andray anjara amin’ity lalao ity.
Nisy moa ny fitsidihana trano eva mandritry ity lanonam-panokafana ity.
samedi, 02 décembre 2017 12:30
Permis Biométrique: Nitondra fanazavana ireo tompon'andraikitra
Namory ny mpanao gazety teny amin’ny Ministeran’ny atitany omaly maraina zoma 01 desambra ny tompon’andraikitra misahana ny fanaovana ny Permis Biométrique.
Nanazava izy ireo fa dia efa mandeha tsara ny fanaovana ny Permis Biométrique amin’izao fotoana izao, raha nisy fotoana nisian’ny fahasimbana ny milina mpanota izany.
Hisy ihany koa araka izany ny fanalavana ny fem-potoana izay hanovana ny Permis izay tokony amin’ny faran’ity taona ity no fetra farany, saingy nalavaina izany izay tsy mbola nofaritana ny daty hiafarany.
Nanazava ihany koa ny teo amin’ny lafiny ara-teknika fa Permis Biométrique tokoa ity atonta ity, milaza ireto farany fa dia misy logiciel fampiasa eto Madagasikara ahafahana mamantatra sy mijery ny mombamomba ilay olona iray.
samedi, 02 décembre 2017 11:58
Sambava: Nanamarika ny Andro iraisam-pirenena hoan’ny Zon’ny Ankizy
Diabe namakivaky ny tanàna no nisantarana ity andro iray lehibe ho an’ny ankizy ity.
Ny 20 novambra 1989, ka feno 28 taona amin'ity 2017 ity ny vaninan’andro naneken’ny Firenena Mikambana ho fiarovana ny Zon’ireo Ankizy, ka izay no notsarovana omaly zoma 01 desambra, tamin’ny alalan’ireo fifaninanana ho an'ireto Ankizy ireto, ary nofaranana tamin'ny fizarana vatomamy.
I Tera Carolle, Parlemantera Ankizy no nanoritra fa "Ny fametrahana ny hasin'ny ankizy dia hitondra fivoarana ho an'i Madagasikara, ary izahay ankizy no hoavin'ity Firenena ity, koa arovy izahay".
Ny Sekretera jeneralin'ny Faritra, Sabotsy Samuel, no nanoritra fa vonona ny hanotrona mba hanantetarahanareo ny adidy izay mifanandrify anareo ary vonona hanampy sy hiaro anareo Ankizy.
samedi, 02 décembre 2017 11:40
Carlton: Andro iraisam-pirenena amin'ny ady amin'ny Sida
Ankalazaina isan-taona ny 01 desambra ny andro maneran-tany amin'ny ady amin'ny areti-mifindra SIDA.Natao tetsy amin'ny Carlton Anosy ny fanamarihina izany ady izany, izay teo ambany fiahian'ny Ministeran'ny fahasalamana sy ireo mpiara-miasa eto amin'ny farity ny Oseanina Indianina.
Nisy ny valan-dresaka natao tamin'izany izay tafiditra tao anatin'ilay teny filamatra hoe: Zoko, Zonao, Zontsika ny fahasalamana.
samedi, 02 décembre 2017 11:23
Mahajanga: Mahazo vahana ny fanaboridanana Bajaj
Tranga matetika miverimberina tato ho ato ny halatra Bajaj. Io maraina io, Bajaj iray indray no lasibatra, nisy nahita teny Antanimasaja Avaratra, efa niala avokoa ny kojakoja madinika azo nesorina taminy, toy ny kodiarana sy ny maro hafa.
Tato ho ato, maraina toy izao hatrany vao hita ny Bajaj avelan'ny mpangalatra azy eny ankalamanjana, lavitry ny toerana nangalarany azy.
Tsy mbola fantatra aloha hatreto hoe, an'iza indray ity lasibatra ity kanefa tsy ho sarotra ny famantarana azy satria misy laharana sy autocollant mazava tsara ilay Bajaj, izay midika fa manana taratasy ara-dalana ary misoratra any amin'ny sampandraharaha misahana ny fitaterana eny anivon'ny Kaominina Mahajanga ilay Bajaj.
Fomba fiady fanaon'ireo olon-dratsy tato ho ato ny manala ireo kojakoja toy izao mba ahasarotra ny fahatratrarana azy ireo.
Misokatra ny fanadihadiana amin'izao raharaha izao.
samedi, 02 décembre 2017 11:13
RN4: La route nationale vers Mahajanga sera coupée ce dimanche
Pour cause de réparation du pont Bailey au niveau du PK334+500 croisement Anjiajia, la route nationale reliant Antananarivo - Mahajanga sera coupée ce dimanche 03 décembre, à 6h du matin jusqu'à 18h le soir.
samedi, 02 décembre 2017 11:03
RN4: Ho tapaka ny lalana ny 03 desambra
Araka ny fanazavan'ny sampandraharaham-paritry ny Asa vaventy eto amin'ny faritra Boeny dia ho tapaka ny lalam-pirenena faha-efatra (RN4) eo amin'ny PK334+500 akaikin'ny croisement Anjiajia ny alahady 03 desambra 2017, manomboka amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny 6 ora hariva.
Fanamboarana ny pont Bailey no anton'izany.
samedi, 02 décembre 2017 11:00
Fianarantsoa: Manampy amin'ny famoahana kara-tany ny Diosezy
Fototry ny disadisa sy tsy fandriampahalemana eny amin'ny fiarahamonina ny olana amin'ny fananantany. Izany indrindra no nananganan'ny vaomiera Justice et Paix ny tetikasa LAMINA eo anivon'ny Diosezy Katolika Fianarantsoa.
Namatsy fitaovana iasana sy hanampiana ny sampandraharaham-panjakana misahana ny fananantany ny tetikasa arak'izany.
Famahana ny olana famoahana kara-tany no tanjona. Efa nisy vokany izany nandritra ny dingana voalohany amin'ny tetikasa. Ankehitriny dia manampy amin'ny fampitaovana ny Diosezy, araky ny vokatry ny fanadihadihana sy filana amin'ny alalan'ity tetikasa ity.
Kaominina valo iasana no nisitraka ireo fitaovana ireo. Nandray kojakoja sy fanaka ihany koa ny sampandraharaha misahana ny fananantany sy ny fandrefesan-tany nandritra io fotoana fanolorana io.
Hita taratra teto fa tsy ampy iatrehana ny famoahana ny kara-tany sy ny manodidina ny fitaovana ampiasaina eny ifotony.
samedi, 02 décembre 2017 10:36
Nous pouvons vérifier à l'aide du site du CENI si nous sommes bien inscrits sur la liste électorale, il suffit d'avoir le nom et le numéro de la carte d'identité Nationale malagasy.
Dans le cas d'absence, se rendre au bureau du fokontany de résidence pour corriger ou s'inscrire avant le 31 janvier 2018.
samedi, 02 décembre 2017 10:34
Fanamarinana ny Lisitry ny mpifidy
Azontsika rehetra atao ny manamarina ao amin'ny site CENI raha voasoratra ao amin'ny lisi-pifidianana ny anarantsika, ny anarana sy ny numero karapanondro dia efa ampy ahitana na ao na tsia.
Raha misy diso na tsy ao ny anarana, dia manatona ny fokontany hipetrahantsika alohan'ny 31 janoary 2018.